ODAWAA oo magacaabay guddi baara kiiska dhul-boob ee lagu eedeeyey ROOBLE | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii ODAWAA oo magacaabay guddi baara kiiska dhul-boob ee lagu eedeeyey ROOBLE
Muqdisho (Dalkaan.com) – Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Jeneraal Odawaa Yuusuf Raage ayaa magacaabay guddi baar boobka la sheegay in lagu sameynayo dhulka ciidamada badda Soomaaliya, oo dadka lagu eedeeyey uu ka mid yahay ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Warqadda kasoo baxday Odawaa ayaa astaan u ah inuu sii xoogeysanayo khilaafka madaxweyne Farmaajo iyo ra’iisul wasaare Rooble, ayada oo uu socdo olole dacwad loogu furayo ra’iisul wasaaraha.
Kooxda madaxweynaha ayaa qorsheyneysa in marka dacwad lagu furo Rooble uu madaxweynaha amro in shaqo ka-joojin lagu sameeyo ra’iisul wasaaraha, si looga wareejiyo hoggaanka xukuumadda iyo doorashada, oo loogu gacan geliyo ra’iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar.
Hoos ka aqriso warqadda kasoo baxday Jeneraal Odawaa
Ujeedo: Magacaabid guddi
Ayadoo la tixraacayo warqadda tixraaceedu yahay WG/XW/00174/21 kana soo baxday Xatiiska Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda federaalka Soomaaliya, soona baxday 21.12.2021 kuna saabsaneyd Baaritaan iyo wax ka Qabasho Dhacdo si waafaqsan sharciga.
Laga bilaabo maanta oo ay Taariikhdu Tahay 21.12.2021, Waxaan Saraakiisha hoos ku xusan u magacaabay Guddi Baaritaan ku sameeya dhacdada ku cad warqadda kor ku xusan, waana sidaan magacyadooda:-
Sidaas darteed, waxaa Guddiga Saraakiisha sare ku xusan lagu adkaynayaa inay si hufan u gutaan shaqada iyo waaajibaadka loo igmaday.
War Deg Deg Ah: Xidigo kamid ah Kooxda Chelsea oo laga...
Chelsea ayaa lagu soo waramayaa in seddex kale oo ka mid ah ciyaartoydeeda laga helay cudurka ‘coronavirus’ ka hor kulankeeda Premier League ay Everton kula...
Chelsea oo Malang Sarr u bandhigtay Kooxaha AC Milan iyo Napoli.
Maxaa looga hadlay kulankii caawa ee R/W ROOBLE, Kheyre iyo Sheekh...
Wararka Suuqa Maanta Ciyaaraha: Gomez, Coman, Haaland, Martial, Azpilicueta, Marquinhos, Milinkovic-Savic
Liverpool oo wax ka badashey Qorshaheeda u dhaqaaqista Arnaut Danjuma
Farmaajo iyo Xasan Sheekh halkee mid walba ugu yimid dalka halkee...
Faroole, Cumar Cabdirashiid iyo Gaas oo 5 qodob kasoo saaray dagaalka...
Xog: Rooble oo jawaab lama filaan ah siiyey wasiiro waan-waan ka...